Maxaa ka Jira Macdanta Uranium Xaddi aad u Badan in ay ku kaydsan tahay Soomaaliya ? | Jubbaland Media Online
Maxaa ka Jira Macdanta Uranium Xaddi aad u Badan in ay ku kaydsan tahay Soomaaliya ?
Posted on March 5, 2016 in Feat, Opinions // 0 Comments
Maxaa ka Jira Macdanta Uranium Xadi aad u Badan in ay ku kaydsan tahay Soomaaliya ?
Akhriste qoraalkan waxaa qoray Cabdullaahi Maxamed Colombo oo wariye ka soo noqday Radio Muqdisho.
Mudo haatan laga joogo in ka badan 40 sannadood ayaa Xog aad u qiimo badan oo lagu daabacey wargeyska The Spokesman-Review ee ka soo bixi jirey Dalka Mareykanka gaar ahaan cadadkiisii soo baxay Bishii Maarso 16,keedii sanadkii 1968-kii ayuu wargeysku isaga oo soo xiganaya Ra’iisal wasaarihii hore ee soomaaliya ee xiligaas alaha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo waqtigaas socdaal ku joogey wadanka Mareykanka Caasimadiisa Washington ayaa wargeysku waxuu qorey hadalkan “ waxaa la ogaaday in macdanta Uranium xadi aad u Badan in ay ku kaydsan tahay Soomaaliya”
Sida wargeysku xusey Shir jaraa,id oo uu saxaafada u qabtey Ra’iisal wasaare Cigaal ayaa lagu qabtey meesha la yiraahdo “Blair House” ee ku taala Magaalada Washington waxaana shirka jaraa,id ujeedkiisu ahaa in Mudane Cigaal uu si rasmiya u shaaciyo kaydka tamarta Urainium-ta iyo macadanaha kale ee Soomaaliya leedahay iyadoo isla markaana Soomaaliya ay danaynaysey wada xaajood ay kala yeelato soo saarista kheyraadkan dhinacyada Maraykanka, Midowga Soofiyeeti Ruushka iyo Dawlaha kale ee danaynayey Arrintan.
Ra,iisal wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal alaha u naxariistee oo waqtigaas ku beegnaa sanadkii 1968,kii Da,diisu ay aheyd 38 jir ayaa intuu shirka jaraa,id socdey ku xusey in Khabiir Qaramada Midoobey ka tirsan uu xogta keydka Uranium-ta Soomaaliya ku jirta uu daah-furey. Khabiirkaasoo sheegey in guud ahaan keydka dunida ee tamarta Uranium-ta afar qaybood ay qayb ahaan ku duugantahay Soomaaliya.
Alaha u naxariistee marxuum Cigaal Ra,iisal wasaarihii hore ee soomaaliya Waxuu kaloo shirkiisa saxafadeed uu ku soo hadal qaadey “ in soomaaliya laga heley macdanta kale ee la yiraahdo Yttrium-ka oo ka qaalisan Uranium-ka”
Wargeysaku Ilo wareedyo kale oo madax banaan ayaa waxey u xaqiijiyeen in Kaydka Uranium-ka Soomaaliya ku jira in ay fara badan tahay, balse aan wali lagu hubin macdanta kale ee Yttnium-ka sida uu ku dhawaaqey Ra’isal wasaaruhu.
Gabagabada qormadan Wargeyskan uu kaga diyaariyey shir saxaafadeedka Uranium-ta Somaaliya waxaa kale uu sidoo kale ku soo hadal qaadey Baahida iyo danaynta shirkado reer galbeed ay qorsheynayaan in soo saaraan Uranium-ta Somaaliya.
Warkan taariikhiga ee la shaaciyey muddo haatan 40 sannadood ka badan laga joogo waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay Soomaaliya ku jirto xasilooni la`aan siyaasadeed in ka badan 25 sanno, Isla markaana la dareensanyahay gacmo shisheeye in ay qasayaan isfahamka Soomaalida dhexdooda.
Dadka ka faalooda xasilid la`aanta siyaasada iyo burburka Soomaaliya heysta ayaa ku sababeeynaya iney saldhig u yahiin dawlad xumaanta iyo danaha shisheeye ee ku loolamaya hodanimada Kheyraadka dabiiciga ee tirada badan ee ay soomaaliya leedahay gaar ahaana dhinacyada khayraadka Xoolaha.Kaluumaysiga, Beeraha,Macadanta iyo Saliida dabiiciga. Inta la ogyahayna ma jiro wadan kale oo kulansaday illahan kheyraadka dabiiciga ah ee soomaaliya uu ilaahey ku maneystey waxaana wax laga xanuunsada ah in nimcooyinkaas uu ilaahey soomaaliya ku galadeystey in misana dadka soomaaliyeed ay ka Gaajoonayaan iyadoo sidoo kalena dhibaatooyinka ku habsadey oo dadkeedu heystaan ay ka mid yahiin Caafimaad daro, Waxbarasho la,aan dhinaca Caruurta ah, Dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin kale oo tiro badan.
Ugu dambeyntii waxaan Ilaahey ka baryayaa in umadda soomaaliyeed uu ka dulqaado dhibaatooyinkaas tirada badan ee heysta una soo saaro hogaamiye daacad ah oo wanaagsan oo dalkiisa iyo dadkiisa uga faa,iideeya kheyraadka uu eebe ku maneystey.